आफ्नै छोरी बलात्कार गर्ने बुबा र काका पक्राउ, यसरि लियो प्रहरीले नियन्त्रणमा — Imandarmedia.com
आफ्नै छोरी बलात्कार गर्ने बुबा र काका पक्राउ, यसरि लियो प्रहरीले नियन्त्रणमा
पर्वत। नाताले आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा पर्वत जिल्ला प्रहरीले पीडितका बुबा र काकालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले दिएको जानकारीअनुसार आफ्नी छोरीलाई बलात्कार गर्ने ४४ वर्षीया बुबा र आफ्नै ३६ वर्षीय काकालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सोह्र वर्षकी किशोरी छोरीलाई गत वैशाख २ गते बुबा र साउन २३ गते काकाले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । बलात्कार गरेका बुबा र काका विरुद्ध किशोरीका दाइले दिएको जाहेरीका आधारमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
अधिकारीका अनुसार पीडित किशोरीकी आमा मानसिक रोगी भएको र नाताले काका पर्नेको श्रीमती काकासँगै नरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको छ र पक्राउ परेकालाई जबर्जस्ती करणीअन्तर्गत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए । पक्राउ परेका र पीडितको नाम, ठेगानालगायतका विवरण गोप्य राखिएको छ ।
यसै गरि : आर–भ्याल्यु’ ले देखायो जोखिमको संकेत
कोभिड–१९ का बिरामीले एकभन्दा धेरैलाई संक्रमण सार्ने क्रम बढिरहेकाले आगामी दिनमा महामारी तीव्र रूपमा फैलने संकेत देखिएको छ । केही दिनयताको कोभिडको ‘आर–भ्याल्यु’ (रिप्रोडक्सन रेट) ले त्यस्तो संकेत देखाएको हो । एक जनाबाट कति व्यक्तिमा संक्रमण विस्तार भइरहेको छ भनेर आर–भ्याल्युले देखाउँछ । ललितपुरको मंगलबजारमा बुधबार एन्टिजेन परीक्षण गरिँदै
नेपालमा कोभिडको आर–भ्याल्यु औसत १.१५ छ । जबकि भारतमा त्यो दर १.० मात्र छ । आर–भ्याल्यु १ भन्दा कम हुनु वा कम हुँदै जानु संक्रमण घट्दै जानु हो । आर भ्याल्यु २ छ भने यसको अर्थ एक जना संक्रमित व्यक्तिले अन्य दुई जनालाई संक्रमण सारेको बुझिन्छ । दादुरा अत्यन्त संक्रामक भएकाले यसको आर भ्याल्यु करिब १८ हुन्छ । अर्थात् एक जना दादुरा संक्रमितले १८ जनासम्मलाई संक्रमण फैलाउन सक्छन् ।
असारको पहिलो साता दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेर ओरालो लागेका बेला आर भ्याल्यु ०.६ सम्म झरेको थियो,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘पछिल्लो केही दिनमा आर–भ्याल्यु करिब दोब्बर भएको छ ।’ उनका अनुसार दोस्रो लहर उच्च हुँदा आर– भ्याल्यु २ भन्दा बढी देखिएको थियो । त्यसबेला ७५ जिल्लामै निषेधाज्ञा लगाइएको थियो ।
चीनको वुहानमा भेटिएको कोभिड भेरिएन्टमा आर भ्याल्यु २.६ सम्म देखिएको थियो । अल्फा भेरिएन्टमा ४ देखि ५ र हाल विश्वमा आक्रामक रूपले फैलिरहेको डेल्टा भेरिएन्टमा आर–भ्याल्यु ५ देखि ८ सम्म हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ । नेपालमा करिब शतप्रतिशत संक्रमितमा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको डा. पौडेलले बताए । गत असार ३१ गते गरिएको पछिल्लो जिनोमिक सिक्वेन्सिङमा शतप्रतिशत नमुनामा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको थियो । त्यसमध्ये करिब ८ प्रतिशतमा डेल्टा प्लस (एवाई.१) समेत फेला परेको थियो ।
निषेधाज्ञा खुल्नासाथ अनियन्त्रित रूपमा भीडभाड, मास्कको प्रयोगमा हेलचेक्य्राइँ र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरबाहीजस्ता कारणले आर भ्याल्यु बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार विश्वभरि नै चिन्ताको विषय बनेको डेल्टा भेरिएन्टका कारण पछिल्ला दिनमा आर भ्याल्युमा वृद्घि देखिएको हो । ईडीसीडीका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले आर भ्याल्युलाई १ भन्दा बढ्न नदिनु नै उपयुक्त हुने बताए । ‘नत्र संक्रमण पछि हुने मृत्यु र अस्पतालमा बिरामीको संख्यामा वृद्घि हुन्छ,’ उनले भने ।
मंगलबार असारयता सबैभन्दा बढी ४ हजार ९ सय ४ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । उक्त दिन १९ हजार १ सय २३ जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो । वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. राजेन्द्र बीसी हाल सरदर चार जनाको परीक्षण गर्दा एक जनामा कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ । सरकारले परीक्षण जति बढाउँछ, त्यति धेरै संक्रमित देखिने अवस्था मंगलबारको तथ्यांकले देखाएको उनले बताए ।
एक सातायता दैनिक संक्रमण पुष्टि दर २४–२५ को हाराहारीमा छ । सक्रिय संक्रमित पनि करिब ८ प्रतिशतले बढेको डा. बीसीले बताए । ‘हाल एक जना संक्रमितले पहिलेको दाँजोमा बढीलाई रोग सारिरहेको यिनै तथ्यांकले स्पष्ट गरिरहेका छन्, उनले भने । हाल संक्रमण तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेकाले परीक्षण बढाएर संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेर महामारी नियन्त्रण गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ।